Mpanakanto iraisam-pirenena : nodimandry, omaly, i Jean Emilien | NewsMada
Mpanakanto iraisam-pirenena : nodimandry, omaly, i Jean Emilien
Noho ny fiakaran’ny tosidra, nodimandry omaly tamin’ny 4 ora maraina, teo amin’ny faha-54 taony (teraka septambra 1963), i Jean Emilien. Mpanakanto andrarezina manana ny toerany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena Rakotonandrasana Jean Emilien. Fitsofana farara, fitendrena kabôsy arahina lantom-peo avy any amin’iny faritr’i Betsileo iny no tena nahafantarana azy. Ny taona 1991, voahosotra ho tompondaka eran-tany amin’ny fitsofana farara (harmonica Hohner) notontosaina tany Detroit, Etazonia, i Jean Emilien. Izy no nandrombaka ny medaly volamena. Tsiahivina fa avy any Ambalavao Tsienimparihy ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity.
Ny taona 1982, nanomboka fantatra nanerana ny Nosy ny fahaizany. Efa noraisim-peo tao amin’ny Radiom-pirenena rahateo ilay hira « Maitso malama » anisan’ny nampalaza azy. Niaiky ny hakanton’izany hira izany avokoa ireo rehetra naheno. Ny taona 1983, taorian’ilay fampisehoana nataony tao amin’ny Cinéma Kanto, nitombo hatrany ny fitiavan’ny olona azy.
Ny taona 1989, nahavita ny « Hey Madagascar » tahirin-kirany voalohany i Jean Emilien. Na nahitana karazan-kira maro aza tao anatiny, heno hatrany ilay fototra rija betsileo ao anatin’ny hira tsirairay. Taona maromaro taty aoriana, namoaka ny « album » mitondra ny lohateny « Ezaka » sy « Miandraza » izy. Anisan’ny nametraka ny lazan’i Jean Emilien teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fahaizany mifehy ny karazan-kira na karazana gadona mampiavaka an’i Madagasikara toy ny vakisaova, basesa, sns.
Tsy teo amin’ny tontolon’ny zavakanto ihany no nahafantarana azy fa tany anivona tetikasa fikoloana sy fikajiana ny tontolo iainana ihany koa. Tamin’ny alalan’ireo hira noforoniny no nentiny nanentana ny Malagasy tsy hanimba na hamotika fa hanatsara ny tontolo iainana toy ny ala.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Jean Emilien sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny gazety Taratra.